Izinto eziluncedo nezingeloncedo ukhethe i umthamo omkhulu ukusetyenziswa pa parlour
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Izinto eziluncedo nezingeloncedo ukhethe i umthamo omkhulu ukusetyenziswa pa parlour
Wonke umntu, kuthethwa ukukhetha iivenkile pa, umoya kunye nenkonzo yokudlala kunye iivenkile, njl, ndicinga ukuba ezahlukahlukeneyo, kodwa imo yokusebenza ukuba ufuna ukuzuza imali iya kuba ingongoma iivenkile ezinkulu ukukhetha.
isimo esebenzayo ulungile, elibe pa, kukho kwakhona linodlamko, oko kuya kuvunyelwa ukuba bazive ezingaphaya. Xa ukwintandabuzo ukuba ukubetha phi na ke, ndicinga ukuba abantu abaninzi bazongena iivenkile ezilungileyo yemeko yokusebenza. Kwanaxa kubhekwa kumacala ahlukeneyo, kodwa mna ndithi, elibe pa ukuba ezihanjiswayo ishishini ethile iye yaba nempumelelo, xa, kunye pa parlour kakuhle kwindlela eluncedo nengeloncedo ekusebenzeni, siza kujonga ntoni kwindawo enjalo.
msebenzi kukuba okulungileyo, iimfuno zonke agent, kukuba elibe pa ukuba esele sizalisekiswe. Hospitality kunye neenkonzo nto, Kakade ke, inxalenye yokudlala Phakathi kwabo kuya kubakho indawo enkulu. Kulo msebenzi yi pa elungileyo egumbini, yenye leyo kwisithuba avareji, yokudlala umnikelo. Kwakhona thina ngakumbi ngokusengqiqweni ukuba linakho ukuliphumelela intengiso, unako kwakhona ukuba njalo eyintlawulo.
ke, maxa wambi nayo umhla ecacileyo ukuqokelelwa apho, kodwa yonke imihla Ngaba unganciphisa imodeli, kuba inguqulelo leyo ngaphandle ngendlela yaso, ngokuxhomekeke injongo, oko kukuba kusenokwenzeka ukuba uwine ukunyuka.
Ukongeza, iindidi abathengi baya kutyelela. Ngenxa yokuba kwanabo nto ingako pa uzayo evenkileni, iqonga kwakhona ukuhambisa ngamandla, ukuba injongo ukuma ukuba apha nganye, apho kudla ngokwenzeka kube itafile free. Yaye othile, ukuze nam Wabaguqukela, umyinge wotyalo-mali sincinci kwaye Kananjalo usenokulindela ukuba bazobe kwizikrelemnqa. Uninzi izibonelelo zokusebenza evenkileni pa elungileyo, nani apho.
Ukongeza, ukususela iintlobo zabantu ukuza kusityelela, kusenokwenzeka ukuba ukuqokelela ulwazi. iivenkile Ezilungileyo ubalekayo, ngokunjalo abathengi abaninzi rhoqo, xa sinxibelelana ngempumelelo nabantu abanjalo, iintlobo kwiinkcukacha ngokuqgibeleleyo kufa yinto esiza endlebeni.
Noko ke, kwelinye icala, kukho ke nazo neengxaki.
稼 Into yokuba umsebenzi olungileyo, isiseko esihle ukuvula kungekudala uza wahlala phantsi. Njl imifuziselo ezithandwayo nenqwelo zamvanje, kuya kungcwatywa kwaoko ndawo. Yima lokhuphiswano khetha iba nkulu, ithi loo msebenzi demerit yi pa elungileyo egumbini. Ukuze ahlale phezu kwetafile ejoliswe, ukususela kusuku olungaphambili, kwaye ukuba iqonga lophando lokuqala, ejonge, kuya kufuneka ukuba batyelele ekuseni ngentsasa elandelayo.
Ukongeza, kunye ngexesha elinye closeout, xa ushiya itafile, kukuba imbuyekezo iya kuba umntu ehleli kule mzuzu, kuya kuba nzima. Xa isixa-mali liye landa, apho unika khona, isigqibo nokuba iqonga ihamba, ndithi ukuba enye demerit kuba nzima.
isimo yokusebenza iivenkile elungileyo, akukho Ngokuqinisekileyo ke ivenkile elungileyo. Ngawo ezingoovimba sidibanisa umtsalane ukutsala abantu, kodwa into yokuba engxakini olunjalo, ndiyeza kwangaphambili kunye nokulwa abantu nabo batshintsha khumbula utsho.